February 16, 2020 phyo News, Premier League 0
လီဗာပူးအသငျးတိုကျစဈမှူး ဖာမီနိုဟာ စနညေက နောဝဈချြကို ဝ-၁ ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ Flick ပေးပို့မှုနဲ့အတူ ပရိသတျတှကေို ထပျမံဖမျးစားနိုငျခဲ့ပွနျပါတယျ။ လီဗာပူးဟာ အဲဒီပှဲမှာအနိုငျရခဲ့လို့ ဒုတိယနရောက စီးတီးကို တဈပှဲပို ၂၅ မှတျအထိ ဖွတျကာ ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈဖို့ ပိုမိုနီးစပျလာပါတယျ။
ဖာမီနိုကလညျး ဒီရာသီမှာ ပိုမိုခွစှေမျးပွနပွေီး ဘရာဇီးသားပီပီ စကေးကလညျး အမွငျ့ဆုံးအနအေထားမှာရှိနပေါတယျ။ ဒီရာသီမှာ သူ့ရဲ့မထငျမှတျတဲ့ပေးပို့မှုတှေ၊ အတို့အဆိတျလေးတှကေ ပရိသတျတှကေို ဖြျောဖွမှေုပေးနိုငျခဲ့ပွီး နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာ ညာခွနေဲ့ ဘယျဘကျကို ပေးမလိုလုပျရငျး ဘယျခွနေဲ့ ဆာလာရဲ့ပွေးလမျးထဲ ခငျးပေးလိုကျတဲ့အကှကျက အတျောလေးလူကွိုကျမြားခဲ့ပါတယျ။
If Roberto Firmino is this good asafalse nine center forward, imagine how good he’ll be in his favoured attacking midfield position. #LFCpic.twitter.com/o7IZVd5EYV
— Nic Mason (@MrNickMason) February 13, 2020
အခုလညျး ဖာမီနိုဟာ ဖီဖာဂိမျးထဲမှာပဲ တှရေ့နိုငျတဲ့ အကှကျနဲ့ ကှငျးလယျလူ ဝဈချြနယျဒမျးရဲ့ပွေးလမျးထဲ အသာလေးခငျးပေးလိုကျတာပါ။ သူဟာ အဲဒီပှဲမှာ အပိုငျအခှငျ့အရေးတဈကွိမျ လှဲခြျောခဲ့ပမေယျ့ ပရိသတျတှကေတော့ ကိုယျလုံးလှညျ့ပွီး ဘောလုံးကို ခွထေောကျအသာထိနျးထားရငျး ညာဘကျကို ထိုးပေးမလိုအနအေထားကနေ ဘယျဘကျမှာ ပွေးတကျလာတဲ့ ဝဈချြနယျဒမျးရဲ့ပွေးလမျးထဲ ခငျးပေးလိုကျတာပါ။
Roberto Firmino'dan fantastik bir pas. 😲😍https://t.co/CpGJ8jxO0Q
— EPL Günlükleri (@EPL_Gunlukleri) February 15, 2020
”တရားလှနျကွီးပဲ”။ ”ဒီဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို မရပျနိုငျဘူးဖွဈနတေယျ”လို့ ပရိသတျတှကေ အသီးသီးရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ဖာမီနိုဟာ ယခုရာသီမှာ အသငျးအတှကျ ၈ ဂိုးသှငျးယူကာ ဂိုးဖနျတီးမှု ၇ကွိမျ ပွုလုပျပေးထားနိုငျပွီး သူ့ကို ချေါယူဖို့ ဘိုငျယနျမွူးနဈက စောငျ့ကွညျ့နတေယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါနပေါတယျ။
တရားလွန်ပေးပို့မှုနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြန်တဲ့ ဖာမီနို
လီဗာပူးအသင်းတိုက်စစ်မှူး ဖာမီနိုဟာ စနေညက နောဝစ်ခ်ျကို ၀-၁ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Flick ပေးပို့မှုနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကို ထပ်မံဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ အဲဒီပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့လို့ ဒုတိယနေရာက စီးတီးကို တစ်ပွဲပို ၂၅ မှတ်အထိ ဖြတ်ကာ ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ပိုမိုနီးစပ်လာပါတယ်။
ဖာမီနိုကလည်း ဒီရာသီမှာ ပိုမိုခြေစွမ်းပြနေပြီး ဘရာဇီးသားပီပီ စကေးကလည်း အမြင့်ဆုံးအနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ သူ့ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ပေးပို့မှုတွေ၊ အတို့အဆိတ်လေးတွေက ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာ ညာခြေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကို ပေးမလိုလုပ်ရင်း ဘယ်ခြေနဲ့ ဆာလာရဲ့ပြေးလမ်းထဲ ခင်းပေးလိုက်တဲ့အကွက်က အတော်လေးလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်း ဖာမီနိုဟာ ဖီဖာဂိမ်းထဲမှာပဲ တွေ့ရနိုင်တဲ့ အကွက်နဲ့ ကွင်းလယ်လူ ၀စ်ခ်ျနယ်ဒမ်းရဲ့ပြေးလမ်းထဲ အသာလေးခင်းပေးလိုက်တာပါ။ သူဟာ အဲဒီပွဲမှာ အပိုင်အခွင့်အရေးတစ်ကြိမ် လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ ကိုယ်လုံးလှည့်ပြီး ဘောလုံးကို ခြေထောက်အသာထိန်းထားရင်း ညာဘက်ကို ထိုးပေးမလိုအနေအထားကနေ ဘယ်ဘက်မှာ ပြေးတက်လာတဲ့ ၀စ်ခ်ျနယ်ဒမ်းရဲ့ပြေးလမ်းထဲ ခင်းပေးလိုက်တာပါ။
”တရားလွန်ကြီးပဲ”။ ”ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို မရပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်”လို့ ပရိသတ်တွေက အသီးသီးရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဖာမီနိုဟာ ယခုရာသီမှာ အသင်းအတွက် ၈ ဂိုးသွင်းယူကာ ဂိုးဖန်တီးမှု ၇ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ပြီး သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်က စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။